ONIVERSITEN’ANTANANARIVO : Mandrahona ny hanao fitokonana lavareny ireo mpandraharaha
Mandrahona ny hanao fitokonana lavareny ireo mpandraharaha eo anivon’ny Oniversiten’ Antananarivo raha tsy misy ny fandraisana andraikitra haingana mahakasika ny fandoavana ny karaman’izy ireo. 7 octobre 2021
Nanomboka omaly no efa nampiato ny fampandehanan’asa rehetra ao amin’ny Oniversite ireo mpandraharaha mivondrona ao anaty sendika maneho izay fitakiana izay.
Araka ny fanazavana voaray dia misy ny tsy fifanarahana eo amin’ny mpanara-maso ara-bola sy ny Minisiteran’ny Vola sy ny tetibola ka mahatonga izao olana amin’ny fandoavana karama izao. Nambaran’ny filohan’ny sendikan’ny mpandraharaha eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo fa nanomboka tamin’ny volana janoary ka hatramin’ny volana aogositra farany teo dia tsy nisy mihitsy ny andraikitra noraisin’ny Fanjakana amin’ny alalan’ny Minisitera tompon’andraikitra tamin’ny fandoavana ny karaman’izy ireo fa ny Oniversite foana no nandoa izany. Ankehitriny anefa, hoy izy, efa lany tanteraka ny vola tahiry eo amin’ity farany ka izay no mahatonga ny olana. Noho izany dia manaitra ny sain’ny tompon’andraikitra ary manome 72 ora hamahana ny olana ireo mpiasa ao amin’ny Oniversite.
« Tapaka fa hiroso amin’ny fitokonana izahay, manomboka androany dia manome 72 ora izay tompon’andraikitra rehetra mahakasika an’ity karama isam-bolana ity izahay. Ny hanomezana an’ilay 72 ora dia hanairana ny Fanjakana fa misy mpiasa tokony hojerena eny amin’ny Oniversiten’ Antananarivo fa tsy hatao ankilabao isam-bolana izao”, hoy ny fanazavana.
An-kilany, namaly azy ireo ny filohan’ny Oniversite izay nilaza fa ny Minisiteran’ny Fampianarana ambony no tokony handoa ny karaman’ireo mpiasa ireo. Tsy mbola azo lazaina ho tara anefa ny fandoavana izany, hoy izy, raha ho an’ity volana ity.
ALAKAMISY 7 OKTOBRA - ALAROBIA 13 OKTOBRA 2021 (0) 7 octobre 2021 Hanonofy ny safidin’ny vahoaka maro an’isa sisa ny antoko Tim FIATREHANA FIFIDIANANA 2023 (0) 7 octobre 2021 Mandeha ny asa fampandrosoana ao Atsinanana VINAN’NY FILOHA RAJOELINA (0) 7 octobre 2021 Mandrahona ny hanao fitokonana lavareny ireo mpandraharaha ONIVERSITEN’ANTANANARIVO (0) 7 octobre 2021 Enim-bolana nanolorana vahaolana ny “Ivotoro” TOROLALANA HO AN’NY TARATASIM-PANJAKANA (0) 7 octobre 2021 Hiantoka ny fandriam-pahalemana ny “Besaboha” sy ny “Dinan’ny Malain-kalatra” FARITRA SOFIA (0) 7 octobre 2021